Umaka: umshicileli | Martech Zone
Sabelane ngamanye amasistimu wezincomo zokuqukethwe njenge-Outbrain. Kuthiwani uma okuqukethwe kwakho kungumbhalo ngokwemvelo, noma kunjalo, futhi kubonakala kakhulu - njengamakhuphoni, imidwebo yolwazi, ihluzo lokuthengisa, ukubizelwa esenzweni noma izithombe? I-Reachli yinethiwekhi yokukhangisa ebonakalayo. UReachli unabakhangisi abangaphezu kuka-70,000 abathola ukubukwa okungaphezu kwezigidi eziyi-3.5 njalo ngenyanga! I-Reachli inobuchwepheshe obuphathelene nokubhangqa kokufanisa isebenzisa igama elingukhiye, umongo, kanye nama-algorithms wokufanisa isithombe ukubhangqa noma yisiphi isithombe esikhona kuwebhu
Ukulungiselela ingxoxo yethu noGuy Kawasaki, ngithenge ikhophi le-APE: Author, Publisher, Entrepreneur-How to Publish a Book. Ngifunde iningi lezincwadi zikaGuy Kawasaki futhi bengingumlandeli isikhathi esithile (qiniseka ukuthi ungena kwinhlolokhono okokuqala lapho engithumela kuTwitter… indaba ehlekisayo!). Le ncwadi yehluke kakhulu, kepha… iyincwadi enemiyalelo yesinyathelo nesinyathelo yokuthi ungazishicilela kanjani nge-ebook yakho. Ababhali uGuy
ULwesibili, April 10, 2012 NgoMsombuluko, Disemba 17, 2018 UScott Hardigree
Ithonya akuselona isizinda esikhethekile sabashicileli abakhulu. Ama-eyeballs kanye nama-dollar wokumaketha ayaphanjiselwa ebuthweni labashicileli abancane, be-niche; kungaba ngabaphathi bokuqukethwe, ama-blogger, ama-vlogger, noma ama-podcasters. Ngokunikezwa kwesidingo esikhuphukile, laba bashicileli abancane bafuna izindlela ezizuzisayo zokuzithathela izilaleli zabo, nemizamo yabo. Inzuzo ezincwadini ze-imeyili Kanye namanye amaqhinga okwenza imali njengamanje, afana nezikhangiso zokubonisa iwebhusayithi kanye nokuxhaswa kwabezindaba zenhlalo, okukhethekile kwanamuhla